पतिलाई गिफ्ट दिन पत्नीले गराइन् बो;ल्ड फोटो शुट,आँखिर किन रिसाए पति? – Khabar Silo
पतिलाई गिफ्ट दिन पत्नीले गराइन् बो;ल्ड फोटो शुट,आँखिर किन रिसाए पति?
पतिलाई खुसी राख्न तथा गिफ्ट दिन भनेर एक महिलाले बो;ल्ड फोटोशुट गराइन्। तर, यो घ;ट;ना उल्टो भइदिएको छ। गिफ्ट पाएर पती खुसी भएनन्। बरु पत्नीमाथि प्रश्न गरे।
यो घ;ट;ना, अमेरिकाको हो। ती पुरुषका अनुसार उनकी पत्नीले केही बो;ल्ड तस्वीर खिचाइन् र एल्बम बनाएर गिफ्ट गरिन्। पत्नीको फरक रुप देखेरपति धेरै खुसी भए।
एल्बम हेरेर पतिले पत्नीको प्रसंशा त गरे तर आश्चर्यको प्रश्न सोधे। के यी सबै तस्वीर आफैँ खिचेकी हौ? जवाफमा महिलाले भनिन् ‘नाईँ’। र, पतिले सोधे यति बो;ल्ड फोटो महिला फोटोग्राफरले खिचेकी हुन्? यसको उत्तर पनि थियो, नाईँ।
यति सुनेपछि ती पुरुष रि;साए। र, सोधे कोही पुरुष फोटोग्राफरका अगाडि न्यूड तस्वीर कसरी खिचाउन सक्यौ? र, यस्तो गर्नु अघि मलाई सोध्नु पर्दैन? -एजेन्सी
काठमाडौँ । हिन्दु धर्म अनुसार शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता अझै मान्ने गरिन्छ । विभिन्न संकेतका आधारमा शुभ र अशुभका बारेमा जान्न सकिन्छ ।त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई आकस्मीत धन प्राप्त हुने गर्छ […]
ज्योतिष शास्त्रलाई विश्वास गर्ने हो भने केही राशि भएका युवतीहरुमा विशेष गुण हुन्छ । उनीहरु आफ्नो राशिको प्रभावले जो सुकै पुरुषलाई पनि पगाल्न सक्छन् । १२ राशिमध्ये चार राशि भएका युवतीहरु आफ्नो सुन्दरता बिना नै कसैलाई रिझाउन सक्षम हुन्छन् । यी निम्न चार राशि भएका युवतीहरुमा मात्र यस्तो प्रभाव हुन्छ, उनीहरुले जस्तोसुकै पुरुषलाई पनि मोहित […]
काठमाडौँ । प्रायजसो मानिसहरुले घरको पूजा स्थान र मन्दिरमा फूल प्रसाद चढाउँछन्। फूल चढाएपछि अब सफा गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यसलाई फोहोरमा लगेर फाल्छौँ । भगवानलाई चढाएको फूल निकालेर नदीमा विजर्सन गर्नुपर्दछ । यो फूलमा निकै शक्ति हुन्छ किनकी यो भगवानको मूर्ती आसपासमा राखिएको हुँदा यसमा शक्ति हुन्छ । तर यसालाई फोहोरमा फाल्दा या बाहिर फाल्नु […]
‘परदेशी २’का लागि प्रकाश सपुतकी नायिका वर्षा सिवाकोटी
पूर्व मिस नेपाल श्रृंखलाले अर्को वर्ष वि वा ह गर्ने !